Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » Ukugcina iSeychelles iPhezulu engqondweni eHungary
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • IHungary Iindaba eziPhulayo • iindaba • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Iindaba zeWired Travel
I-Seychelles iqinisekisa ukuba ihlala ibonakala kwaye ifanelekile kubo bonke abakhenkethi abanokubakho, ithatha ukhenketho lwayo lwendawo yokuya kwi-COVID-19 phezulu xa yayizimase umboniso wendlela we-Aviareps eHungary ekupheleni kuka-Okthobha wama-2021.
Indawo yokufikela iSeychelles yaphuma yonke intengiso yeziqithi kwaye yaqinisekisa ukuba iya kuba yenye yezona ndawo zintle zokundwendwela abantu baseHungary.
Inxalenye yokuqala yocweyo ibiluthotho lweenkcazo-ntetho ezenziwa ngumbonisi ngamnye.
Oku kwalandelwa yifomathi ye-robin ejikelezayo apho abathathi-nxaxheba babandakanyeka kwi-1-to-1 ishishini kunye nababonisi.
Umboniso wendlela wawuphakathi kweminye yeminyhadala yokuqala eyaqala kwakhona kwingingqi yeCIS nakwiMpuma Yurophu emva kokuba ubhubhane ubeke uhambo lwehlabathi emadolweni uninzi lwale minyaka mibini idlulileyo.
Kunye nabanye ababonisi abali-15 ababandakanya iindawo ezifana neThailand, iCroatia, iMontenegro neJamaica, Seychelles yoKhenketho baphume bonke besiya kuthengisa iziqithi kwaye baqinisekise ukuba iya kuba yeyona ndawo "eyeyona iphambili" yokundwendwela abantu baseHungary kwezi nyanga zimbalwa zizayo nango-2022.
Indawo yokuya yayimelwe kwizixeko ezine zaseHungary zaseBudapest, Gyor, Debrecen kunye neSzeged nguMlawuli wezoKhenketho waseSeychelles eRashiya, iCIS kunye neMpuma Yurophu, uLena Hoareau, kunye no-Anna Butler-Payette, uMlawuli oLawulayo we-DMC yendawo 7 ° South. Ukusuka kwisixeko ukuya kwesinye, baxelela abathathi-nxaxheba indlela ISeychelles ihlala ikhuselekile kwaye iyindawo efanelekileyo yokuhamba, ilungele ukwamkela iindwendwe zayo kwakhona.
Inxalenye yokuqala yocweyo yayiluluhlu lweenkcazo-ntetho ngumbonisi ngamnye olandelwa yifomathi ejikelezayo apho abathathi-nxaxheba babandakanyeka kwishishini eli-1 ukuya kwi-1 kunye nababonisi.
Ethetha emva komboniso wendlela, uNksz Hoareau waphawula ukuba kusekho umdla omkhulu kwindawo ekuya kuyo kwaye abaninzi abakhenkethi baqinisekisa ukuba sele bethengise iiholide ezininzi kwiiSeychelles kwiinyanga ezizayo. Bebesoloko befumana eminye imibuzo emininzi enokuthi ijike ibe kukubhukisha ngokunyanisekileyo, becinga ukuba ngoku baziswe ngcono ngeemeko zokuhamba kunye nemeko yendawo ekuyiwa kuyo.
Omnye umthathi-nxaxheba owayekhe waya eSeychelles kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo kumtshato wakhe kunye neholide yasemva komtshato wakhe, ubalise ngamava akhe endlela aziva ngayo ukuba indawo yokuya yeyona ndawo ifanelekileyo yezibini kunye nabanye abahambi abazama ukubaleka i-COVID-19 kunye neenyanga ezizayo zasebusika.
“Kusekho umdla omkhulu kwindawo ekusingwa kuyo into enkulu kuthi. Kuqhelekile ukuba abantu bazive bethandabuza ukuhamba naphina ukuba abanalo ulwazi oluchanekileyo, ke siye saqinisekisa ukuba bayaqonda ukuba ngaphandle kwemigaqo emitsha, iSeychelles ihlala yenye yezona ndawo zikhuselekileyo zokuya kuzo kwaye ibonelela ngokungenangxaki. amava,” watsho uNksk. Hoareau.
Wongeze ukuba ngelixa iindawo ezininzi zokuya zineemfuno ezingqongqo zokungena endaweni, njengokuvalelwa okunyanzelekileyo xa ufika okanye uphinda uvavanyo lwe-PCR emva kweentsuku ezimbalwa, iSeychelles ibonelela ngamava angenamthungo ekufuneka ibe yeyona nto ithatha isigqibo kuye nabani na ocwangcisa iholide phesheya.
“Abakhenkethi bafuna iindawo ezikhululekileyo zokuya apho banokuchitha khona iiholide zabo ngaphandle kwesoyikiso esiqhubekayo se-COVID-19. Enye yee-USP zethu ezinamandla okwangoku zichanekileyo
ukuba-sibonelela ngeendawo zokuhlala ezikhuselekileyo kubahambi abanezithintelo ezincinci endaweni ukuze bakwazi ukuhlala bekhululekile kwaye benoxolo lwengqondo. "
Ethetha ngokuthatha inxaxheba kweSeychelles kumboniso wendlela waseHungary kunye neminye iminyhadala ezayo njengoko imisitho yorhwebo ebonakalayo iqhubeka ngokuthe ngcembe, uMlawuli Jikelele wezoKhenketho eSeychelles, uNksk Bernadette Willemin uthe,
"Kusengamaxesha angaqinisekanga anezithintelo ezihlala zitshintsha, kodwa abantu bazimisele ukuphinda bahambe kwaye thina, njengendawo yokuya kuyo, kufuneka siqinisekise ukuba xa besenza njalo, iSeychelles iphezulu ezingqondweni zabo."
UNksk. Willemin wongeze wathi, “Imisitho ebambekayo incede kakhulu ukugcina indawo ekuyiwa kuyo ibonakala ngexesha lobhubhane, nangona kunjalo, iingcali zorhwebo zokuhamba ngoku zibuyile endleleni kwakhona ukuze ziqale ishishini. ITourism Seychelles kufuneka iqinisekise ukuba ikhona kwimisitho ephambili yamazwe ngamazwe ukuze ingaphulukani neshishini kwaye indawo ekusingwa kuyo ihlale ibonakala kwaye ibalulekile njengoko iindawo ekusingwa kuzo zivula imida yazo kukhenketho lwamazwe ngamazwe.”
Ngo-2019, indawo ekufikelwa kuyo isiqithi yamkele iindwendwe ezingama-3,721 zaseHungary kunye ne-1,629 ukusuka ngoMatshi ka-2021 ukuya kuthi ga nge-31 ka-Okthobha, ngo-2021.